Ọnwa iri na nwata - mmepe, ihe oriri, menu, ọchịchị. Kedu ihe nwatakịrị ga - eme n'ime ọnwa 10?
Ọnwa iri na nwata - gini ka nwatakiri ahu nwere ike isi na ya, na otu esi eme ka ohia?
Kwa ọnwa n'ime ndụ nke nwa ruo otu afọ bụ ụzọ dị mkpa nke na-etolite. Ọ na-etolite ngwa ngwa, na-etolite, na mgbe o chigharịrị ọnwa 10, ọ maarala ọtụtụ. Ndị nne na nna nyochaa ọnọdụ nke mkpụrụ ahụ, na-achịkwa akụkụ ahụ ya na mmepụta echiche, na-aṅụrị ọṅụ na ihe ọhụrụ ọhụụ nwatakịrị na-agbalị iji mejupụta oghere ndị na-efu na agụmakwụkwọ.
Ogo na ibu na ọnwa 10
N'ime ọnwa isii mbụ nke ndụ, nwa ahụ na-etolite ike, na-agbakwunye 600-900 g na 2-3 cm kwa ọnwa. Mgbe ahụ, usoro ahụ na-ebelata n'ihi na ike nwatakịrị ahụ dị elu. Onye ọ bụla n'otu n'otu, ma ị nwere ike ịbịaru ọnụ na-emekarị. E nwere usoro iwu nke ndị nne na nna na ndị na-ahụ maka ụmụaka ga-eji chọpụta ma è nwere ihe ọ bụla dị iche iche na mmepe nwa. Maka afọ enyere, a kọwapụtara ndị na-egosi, oke ma ọ bụ ibelata nke a ga-atụ egwu. Dị ka ha si kwuo:
Ọnụ arọ nke nwatakịrị n'ime ọnwa 10 bụ 7.9-11 n'arọ.
Ọkwa dị elu nke nwata na ọnwa 10 bụ 68-79 cm maka ụmụ nwoke, 66-78 maka ụmụ agbọghọ. Ezigbo - gbakwunyere ma ọ bụ minus 3 cm.
Nri nke nwa n'ime ọnwa 10
Ndị nne na nna nke nwata ahụ na-eto eto na-agbalị inye ya nlekọta zuru oke, na-elekwasị anya na nri kwesịrị ekwesị dịka afọ. A na-ewebata oge oriri nke oge a. Nri nwa ahụ dịgasị iche na ọnwa 10, nri ụbọchị a na-edozi ihe niile: a na-ewebata soups, azụ na anụ anụ, desserts, wdg. Nri dị mma ka a na-edozi ya, sie ma ọ bụ ghaa ya, ya mere ọ na-ejide vitamin niile. A na-ebufe nwata ahụ na tebụl nkịtị, ma ọ bụrụ na o kwere mee, nne na-enye ya (ọ bụghị karịa 1/4 nke olu kwa ụbọchị) na mmiri ara ehi ma ọ bụ ihe oriri.
Ị na-enye nwa ara na ọnwa 10
Ịzụ nwa ahụ na ọnwa 10 pụtara ịṅụ ara ara. Dị ka ihe oriri si dị, nwa ahụ na-aṅụ ara n'ime obi tupu ya lakpuo ụra ma nweta ọgwụ dị mkpa nke mmiri ara ehi ozugbo edemede. Nri nri ụtụtụ a abụghị nri ụtụtụ zuru oke, mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ihe ndị dị na porridge ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-eri nri. Kama mmiri ara ehi - ọ bụrụ na nne akwụchara nri, ma ọ bụ na nwa ahụ bụ artificial - ị nwere ike inye kefir ma ọ bụ ngwakọta a gbanwere. N'ime ọnwa 10, nwatakịrị ahụ na-enweta ihe mgbakwunye na 2 ruo 6 ngwa ngwa.
Na-eri nri na ọnwa 10
Ebubelarịrị ịmalite ịmepụta oge maka ọnwa iri, ngwaahịa ọhụrụ na-esite na tebụl n'ozuzu ya. Ihe ndị a bụ ihe oriri na nri ara ehi, ọka na-enweghị gluten , anụ na azụ, wdg. Ọdịiche adịghị mkpa ịba mmiri, karịsịa ma ọ bụrụ na ndị mbido mbụ dị n'akụkụ a. Kedu ihe ị ga-eji zụọ nwata n'ime ọnwa 10, mgbe ezé ya malitere ịkụ? Mkpụrụ ọhụrụ dị mma: pears, apples, plums, banana. Tụkwasị na nke ahụ, n'ime ọnwa 9-10, a na-ewebata ụdị nsị dịka:
cheese cheese (maka ụmụaka);
anụ puree na anụ efere (meatballs, meatballs);
azụ azụ dị ala;
akwa nkochi ime akwa;
mono-cereal porridge (na butter);
Ntughari ụmụaka na ọnwa 10
Ụmụaka na-eme mgbanwe dị iche iche na iwebata ngwaahịa ọhụrụ na nri, karịsịa obere allergies. Ya mere, nchịkọta dị na ọnwa 10 maka ọdịiche dị iche iche, mana ọ dị oke, na-agụnye ọtụtụ nri. Ihe oriri na-agụnye ihe dị ka nri ise, na-agbaji n'etiti ihe dị ka awa anọ:
Nri ehihie (nri abalị mbụ).
Mgbe umuaka na-eme ọnwa 10, na nkezi otu ụbọchị ọ na-eri site na 1 ruo 1.5 n'arọ nke nri. Olu nke ọ bụla na-eje ozi dị 200-250 g mana mana na-adabere na ngwaahịa ahụ, iwu ha kwa ụbọchị dị iche.
Ihe nchịkọta nhọrọ na ọnwa 10 bụ:
Akwukwo nri, poteto akuku - 200-250 g.
Mmiri ara ehi-200-220.
Mkpụrụ puree - 100-110 g.
Yolk - 1 PC. (1-2 ugboro n'izu).
Nri - 80 g.
Mkpụrụ - 60-70 ml.
Azụ - 50 g.
Chikota obi - 50 g.
Achịcha kporo, achịcha ọcha, kuki - 10 g.
Bọta, mmanụ ihe oriri - 5-6 g.
Usoro nwa na ọnwa 10
Idebe iwu nke ilekọta nwa ahụ, ndị nne na nna na-anwa ịmepụta usoro kachasị mma kwa ụbọchị - ụra na ezumike, nri, ije na usoro nlezianya kwa ụbọchị. Ọchịchị ahụ na-enyere aka na-ebi ndụ n'udo na ụra zuru oke ọbụna na nwatakịrị nọ n'ụlọ. Kedu ka nwa ahụ na-ehi ụra n'ime ọnwa 10? N'ehihie, dị ka a na-achị, nke a bụ oge ezumike abụọ nke dị ihe dịka minit 60:
N'okpuru ọnọdụ mgbake n'oge (6-7: 30), ụra ehihie ga-abụ awa 11-12.
Mgbe nri ehihie - izu ike nke abụọ, ihe dị ka 15: 00-16: 30.
N'abalị, ụra ahụ na-ehi ụra site na awa 8 ruo 12.
Ihe omume a na-atụ aro kwa ụbọchị na-agụnye ntụgharị oge nke ụra na nkwụsị. Oge ụtụtụ nke nwa ahụ ozugbo edemede mgbe ụtụtụ, egwuregwu, ije. Mgbe nri nke abụọ, ị ga-ezu ike, wee - ọzọ, igwegharị na egwuregwu na-emepe emepe, nọrọ na ikuku ọhụrụ, gymnastics, ịhịa aka n'ahụ. Ọ dịghị mkpa itinye nwa ahụ ụra ozugbo e risịrị nri abalị, ị nwere ike ichere otu awa ma ọ bụ abụọ, na-eme ụfọdụ ihe dị jụụ, dịka ọmụmaatụ, ịgụ akwụkwọ na nwata ahụ. Mgbe izu ike - nri ọzọ (nri abalị mbụ), egwuregwu na ije, nri, ịsa ahụ na ezumike nká.
Ịzụlite ụmụaka na ọnwa 10
Eyen na ọnwa 10 amala ma ghọta ọtụtụ ihe. Ọ tolitere n'anụ ahụ: ọ mụtara ịhazi mmegharị ya ma nọgide na-azụlite nkà na ụzụ ọma, ngwa ngwa ngwa ngwa, na ụfọdụ ụmụ ọhụrụ na-amalite ije na-enweghị onwe ha. N'okwu mmetụta uche, nwatakịrị dị ugbu a. Ụmụaka na-ekere òkè na nkwurịta okwu na ndị mụrụ ha, ghọta okwu ndị a na-agwa ha, jiri obi ụtọ mezuo arịrịọ ma meghachi omume na-ezighị ezi na omume ọjọọ (dịka ọmụmaatụ, belata mbọ ha). Ngwá ndị a ga-enwe nwa ọnwa iri, mmepe nke ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ nwere ike ịdị iche:
O yikarịrị ka ụmụ agbọghọ ga-etinye aka na ihe omume dị iche iche ma mee ka ndị ọgbọ ha nke na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ha nwee ike ịmụta ite ahụ , jiri ngaji, okwu mbụ.
Ụmụntakịrị na-ekwusi ike, na-achọ nnwere onwe, ka ha wee nwee ike ịmalite ije n'oge. Nnọgidesi ike na-enwekarị.
Kedu ihe nwatakịrị ga - eme n'ime ọnwa 10?
Ọtụtụ mgbe, ndị nne na ndị nna na-ajụ onwe ha, sị: gịnị ka nwatakịrị ga-enwe ike ime n'ime ọnwa 10? Ihe ndị a na-eme ugbu a na-emetụta mmepe ahụ. A na-ahazi nkwekọrịta nke ijegharị, ma ọ bụrụ na enweghi ihe ọ bụla.
Ụmụaka kwesịrị inwe ike:
were ihe n'aka;
were ihe mkpịsị aka wepụta ihe;
agafe, ijide oche nkwagharị ma ọ bụ ogwe aka;
ka o si n'ugwu ahu ridata ma rigoro na ya;
mepee ọnụ ụzọ na mkpuchi;
chọta ihe ziri ezi n'etiti ndị ọzọ;
Mee mmegharị ihe ngosi na aka gị;
imeghachi omume na ụda maka ndị okenye.
Kedu otu esi azụlite nwatakịrị n'ime ọnwa 10?
Mmetụta mmetụta uche na nke anụ ahụ nke ụmụ zuru oke na-ada n'ubu ndị nne na nna. Ha kwesiri ima otua esi zulite nwa n'ime ọnwa iri iji tinye ya na ihe omuma di mkpa.
Idebe iwu ndị dị mfe ga-enyere nwa ahụ aka itolite n'otu:
Ọ dị mkpa iji kwadebe nwatakịrị ka ọ na-agagharị, ịkwaga ebe obibi n'enweghị nsogbu, iji chọpụta ụwa.
Ọ dị mkpa ịme ka ụkpụrụ omume dị n'ụlọ na-eme ka ị ghara ime ihe.
N'ụlọ nke nwatakịrị ahụ, a ghaghị inwe ebe ọ ga-etinye ihe egwuregwu ya.
Ihe omimi gymnastic enyere nwa aka imuta uzo esi aga ije ngwa ngwa. N'oge njem ahụ, ọ bara uru ịtọhapụ ya na mkpịsị aka, na-ejide aka iji nyere ya aka.
Ọ dị ezigbo mkpa ikwurịta okwu n'isiokwu ọ bụla iji wusi okwu nke nwa ahụ.
A ghaghị ịgụ ma ọ dịkarịa ala obere oge kwa ụbọchị.
Egwú na ịgba egwu dị egwu, egwuregwu maka mmepe nke nkà na ụzụ ọma, ihe jikọrọ aka na ihe omume ndị ọzọ.
Ihe egwuregwu ụmụaka na ọnwa 10
Nwa na-eto eto nwere mmasị ịchọta ụwa gbara ya gburugburu. O nwere ike ime nke a site n'enyemaka nke ihe ndị na-aga n'ihu. Ọ bara uru ịhapụ nwatakịrị:
wunye mmiri si akpa n'ime akpa;
iji kpoo okpo ahu n'elu akwa;
eji egwu na egwu egwu;
akwụkwọ mkparịta ụka;
na-akpụzi site na mgwakota agwa na ụrọ.
Ọ dị mma ma ọ bụrụ na e nwere ihe eji egwu agụmakwụkwọ dị mma n'ụlọ. N'ịbụ onye obi ụtọ, nwatakịrị dị ọnwa 10 na-emekọ ihe ndị dị ka:
ndị na-agba afa ;
ụmụ bebi nesting;
efere maka ụmụ bebi na ihe ndị ọzọ eji egwuri egwu.
Egwuregwu maka ụmụaka na ọnwa 10
Mgbe ọ dị afọ iri na nwa ahụ nwere ike ijide onwe ya, ọ na-eji obere ihe eji egwuri egwu na-ebu ya. Ọ bara uru ịhapụ obere ihe (ma n'okpuru nlekọta). Otú ọ dị, iji mezuo nzube nwata ahụ chọrọ egwuregwu na ndị nne na nna. Site n'enyemaka nke onye toworo eto, ụmụaka na-enwe ike ichikota pyramid ahụ, na-anagide ọnyà ahụ, na-etinye nwa bebi ahụ ụra, kpuchie ya na blanket. A na-ekewa egwuregwu maka ụmụaka ọnwa iri na isii n'ime ụgbọ ala, ikwu okwu, nke a na-eji eme ihe nzụlite na mmekọrịta. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ọrụ dịka:
"Marathon", imeri ihe mgbochi;
ngwugwu (ihe e ji ede akwụkwọ, ngwugwu);
ọrụ na clothespins - chọta ma wepu;
ọnụ ọgụgụ nke isiokwu ahụ na foto.
Nwa afo iri na isii - oge di nkpa, mgbe ndi nne na nna nwere obi uto na ha na nwa ya tolitere. Nke a bụ oge siri ike ma na-adọrọ mmasị bụ nke ọ dị mkpa ịtọgbọ nkà nke mmekọrịta na ụwa dị n'èzí. N'oge na-adịghị anya nwatakịrị ga-amụta ije ije , ọ dịkwa mkpa iji kwadebe ya maka nke a, ịmepụta mmekorita nke mmegharị, na-eme mmemme ntụrụndụ. Omume ziri ezi nke ndị nne na nna bụ isi ihe na-eme ka nwatakịrị nwee ihe ịga nke ọma na ahụike.
Karịa ịzụ nwa ahụ na ọnwa 11?
Mgbe isi meghere na ụmụ nwoke?
Ịzụlite ihe mgbochi - na afọ ole?
Nwa ahụ dị ọnwa abụọ. Esi zụọ nwa na ọnwa 2, ụra na ihe oriri
Ọrụ nke nwa popu
Egwuregwu na nwa na ọnwa 7
Na-eri nri n'ime ọnwa anọ na nri nri
Rhinitis anụ ahụ na ụmụ ọhụrụ
Kedu ụdị okpomọkụ ị chọrọ ịkụtu nwatakịrị n'okpuru otu afọ?
Nchịkọta mmiri na-enweghị mmanụ nkwụ - ndepụta
Gingivitis na ụmụaka
Uwe na-adịghị mma mere Eva Longoria rectangular
Mmechi obi na-edozi onwe ya na ụmụaka nwere nsogbu omume
Cystitis na nkịta - mgbaàmà na ọgwụgwọ
Kedu egwuregwu ị ga-eme iji belata ibu?
Kedu nkịta ị ga-ahọrọ?
Umu uwe nwanyi di nma - oyi 2015-2016
Ụdị Tumor - Mgbaàmà na Ọgwụgwọ
Bed nke siri ike fir
Enwere m ike ịga ụlọ ime tanning?
Ogige Botanical nke Namibia
Gịnị ma ọ bụrụ na ihe niile dị njọ ná ndụ?
Nyocha ultrasound na ime
Na imi na-adighi ike
Ebube ala na aji aji
Kedu esi ehicha imeju?